Gudoomiye Jawaari oo Jowhar kula kulmay waxgarad ka soo jeeda gobollada Hiiraan iyo Sh/dhexe – Radio Muqdisho
Gudoomiye Jawaari oo Jowhar kula kulmay waxgarad ka soo jeeda gobollada Hiiraan iyo Sh/dhexe
Gudoomiyaha baarlamanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” ayaa magaalada Jowhar kula kulmay waxgarad ka soo jeeda gobollada Hiiraan iyo Sh/dhexe, isagoo ka qanciyay tabashooyin ay qabeen qaar ka mid ah odayaasha labadaasi gobol.
Mudane Jawaari ayaa waxgaradkaasi ku ammaanay kaalinti ay ka soo qaateen habsami u socodka shirka dhismaha maamulka Hirshabeelle oo hadda maraya heer gabagabo ah.
Gudoomiye Jawaari ayaa la sheegay in odayaasha uu ka qanciyay tabashooyin ay qabeen, wuxuuna ku boorriyay iney ka qeybqaataan dhameeystirka dhismaha maamulka Hirshabeelle, ayna ku gacan siiyaan gudashada waajibaadkiisa.
Afhayeenka Baarlamanka Federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” ayaa magaalada Jowhar uga qeybgalay dhaarinta xildhibaannada iyo doorashada gudoonka baarlamanka Hirshabeelle.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Cadaado
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Cadaado